Floor Lamp, Ithebula Isibani, amalambu Shade, LED adaptha, ishalofu Floor Lamp - Mahle
Ifoni: + 86-0755 28684337
Ipoto Yennyawo Ezintathu Floor Lamp
Metal Ithebula Lamp
Izinkuni Ithebula Lamp
USB Ithebula Lamp
1-5W LED adaptha
6-12W LED adaptha
18-24W LED adaptha
Likhanyise elingaphakathi yakho nge, isibani yethu ehlukile phansi umklami Metal. Jova okunethezeka nasemahontshi futhi elinamakhosomba, noma ukubalekela ethokomele, okwakhiwa ngalo ukufunda Nook. Dlulisa amehlo ukukhiqizwa yethu ukukhanyisa owayephila kanye zendabuko, kusukela oluyingungu metal imiklamo nezibani Moroccan esiphefumulelwe ukuze nenhle izibani Metal nabade, izitayela mncane.
Ephezulu isitayela, isibani phansi Ipoto Yennyawo Ezintathu ungeze khona manjalo classiness kunoma isikhala! Sikhulise legumbi noma babeke enye eceleni usofa yakho egumbini lokuphumula ukuze kwalokho ethokomele. Yenza umuzi wakho ethokomele nezixazululo okukhulu okuvela ukukhanyisa yethu iqoqo at Mahle Khanyisa. Cabanga izibani phansi zensimbi kuphela, tripod izakhiwo noma imininingwane lokhuni.
izibani Ithebula akuvumele esihle kutsha umoya egumbini ngezindlela ezingaphezu kweyodwa. Bekunikeza ukukhanya eyengeziwe lapho uludinga ngenkathi futhi wengeza kancane ubuntu. Ezethu ayatholakala Ukukhetha eziningi izitayela ukwengeza kancane extra umbala, ukuthungwa nokukhanya home.Metal yakho Ithebula Isibani, Izinkuni ithebula isibani, USB ithebula isibani ...
Modern sleek, lokhu Shelf Floor Lamp kusukela Mahle Khanyisa unezela isitayela okusheshayo noma iliphi igumbi. Lokhu isibani emangalisa kudala ocebile, Ambience nenhle, futhi kabili njengoba ishalofu ezimbili-tiered, ukunikela indawo ephelele kokubonisa izincwadi zakho, isitsha sezimbali noma isithombe ozimele. Lokhu isibani phansi eshalofini esiwusizo futhi stylish uyobheka elilandelayo kakhulu kusofa lakho, usofa noma yimuphi omunye ifenisha ekhaya lakho.
Mahle Khanyisa Technology Co., LTD. Yakhiwa 2015 futhi Sise Shenzhen.Weare gxila kokunikeza izinhlobo izibani zasendlini ephathwayo customers.Justafter yethu unyaka owodwa, siphumelele ukuthola yekhasimende ukwethembana futhi ukuphakama udumo withexcellent ikhwalithi price.Our completive Amakhasimende akuzona kuphela ChinaMainland, kodwa futhi eYurophu, eMelika kanye eNingizimu-mpumalanga ye Asia.Most ka ourcustomers baye wahlakulela ubuhlobo aqinile, kusukela businesspartner abavamile wokuqhutshwa kwebhizinisi umlingani. Ukuze ukuhlangana customersrequirements wethu, sakha yethu umzalwane Khanyisa factory Grand Champ LightingTechnology Co, LTD at Huizhou. Ngale ndlela, imikhiqizo yethu nge completiveprices ngaphezulu kanye nemikhiqizo ububanzi kuyacetshiswa, Kusukela umshayeli LED ukuze izibani LED, kusukela lampparts ukuba Qedela lamps.We ungumhleli umphakeli USA Target, Walmart futhi Bbb.
Ngo-2017, ngokusho manycustomers izidingo, thina cwaningo ugone imeyli orders.As ku lineshopping akugcini nje amukelwe eChina, kodwa futhi wonke imikhiqizo world.Nowour zidayiswa ngempumelelo Amazon kanye Taobao, TMall.COM Futhi JD .com nge izinga zethu ezinhle futhi amanani, iphakethe especiallyour encane owamukelwa amakhasimende ethu.
Mahle Khanyisa, kuba yourgoodly Khetha bese beyithatha kalula yakho ibe yinhle!
R1120, Tiedong Park, Ping i Road, Pinghu Street, Longgang Destric, Shenzhen, China, 51811
Sishayele manje: + 86-0755 28684337